दशैं-तिहार अर्को वर्ष पनि आउँछ | Bhutan News Service
दशैं-तिहार अर्को वर्ष पनि आउँछ
By भक्त घिमिरे
दशैंका सांस्कृतिक/ ऐतिहासिक पक्षहरु जे जे भए पनि सामान्य बुझाइमा दशैं भनेको सुख, खुशी र आनन्दको उत्सव हो । तर, यो वर्षको उत्सव केही फिक्का हुने यो बेलाको परिवेश छ । कोभिड-१९ नाम दिइएको एउटा विश्वव्यापी हैंजा-संक्रमणले आजको परिवेश बिगारिदिएको छ । मान्छेसित धन नभए पनि ज्यान स्वस्थ छ भने आनन्दित हुन सकिन्छ भन्ने कुरो तपाईं हामीलाई कसैले सिकाइरहनु पर्दैन ।
त्यसो हुनाले अर्को वर्षसम्म बाँचिएला नबाँचिएला, दशैं त मोजमस्तिका साथ मनाउनैपर्छ भन्ने जिद्धि नगरौं । आफन्तहरु पनि प्रविधिको प्रयोगमार्फत भेटघाट गर्न सकिन्छ । उहिले प्रविधिको विकास नहुँदै विकास भएको सामाजिक संस्कृतिको प्रतिविम्ब मात्र हो दशैं । हामी सबै स्वस्थ भई बाँचिराखे दशैं त अर्का अर्का वर्षहरु पनि हाम्रो अगाडि आई नै रहनेछ !
शुरु शुरुमा कोभिड-१९ को संक्रमणबाट मानिसहरु धेरै त्रसित थिए । तर, यतिबेला यसलाई मानिसहरुले उपेक्षा गर्न थालेका छन् । हल्का रूपमा लिन थालेका छन् ।
त्यसको तात्पर्य, हैंजाको प्रभाव घटेको छ भन्ने होइन । अहिले पनि मानिसहरुको अधिक चहल-पहल बढ्यो भने यो रोगको सङ्क्रमणलाई रोक्न सकिँदैन । कोभिड संक्रमित व्यक्तिलाई उपचारमा ढिलाइ भएमा बँचाउन सकिँदैन भन्ने स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुको सल्लाह सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको परिस्थितिमा स्वास्थ्यकर्मीहरु नै यस धर्तीका देउता वा भगवान हुन् जसका अगाडि आपतको घडीमा मानिसहरु नतमस्क हुन्छन्/हुनै पर्दछ ।
स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुका अनुसार कोभिड संक्रमित व्यक्तिको स्वास-प्रश्वासमा अक्सिजनको मात्रा घट्तै जान्छ । मानिसले आफैं आफ्नो शरीरले ग्रहण गर्ने अक्सिजनको मात्रा थाहा पाइरहेको हुँदैन । शरीरमा आवश्यक अक्सिजनको मात्रा ९० प्रतिशतभन्दा कम भएपछि त्यो मानिसमा रोगप्रतिरोधक क्षमता घट्तै जान्छ र उसको मृत्युको सम्भावना बढ्दै जान्छ ।
विश्वका कति देशमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले कोभिड संक्रमितलाई ९० प्रतिशतभन्दा तल अक्सिजनको मात्रा झरेपछिमात्र उपचार शुरु गरेका कारण मृतकहरुको संख्या कहाली लाग्दो रूपमा बढेको केही विशेषज्ञहरुको दाबी छ । रोगीको शरीरमा अक्सिजन ९० प्रतिभन्दा माथि हुँदै उपचार गरिएमा रोगी मृत्यु नहुने कुरा कोभिडको असर कम भएका केही देशहरुले उदाहरण पेश गरिसकेका छन् । नेपालमै पनि यस्तो उदाहरणीय काम भएको छ पत्र-पत्रिकामा लेख र समाचारहरु पढ्न पाइँदैछ ।
अमेरिकामा पनि पहिलेको मान्यता के थियो भने अक्सिजनको मात्रा ९० प्रतिशतसम्म घटुञ्जेल अस्पतालहरुमा रोगीलाई सामान्य रूपमा राखिन्थ्यो । त्यसो गरिनाले संक्रमितहरु अचानक सिकिस्त हुँदै उनीहरुको शरीरको अक्सिजन तल तल झर्दै ७० सम्म पुग्थ्यो भने उनीहरु आईसीयू र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्थामा पुग्थे । तर, अहिले उपचारमा सचेतना विकास भएको छ र मर्नेहरुको संख्या पनि धेरै घटेको छ । यद्यपि, संक्रमणको क्रममा कुनै कमी आएको छैन ।
एकजना नेपाली स्वास्थ्यविज्ञका अनुसार कोभिडको सवालमा ‘Contact Camp’ अति महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको अर्थ कोभिडबाट संक्रमित व्यक्तिसित तपाईंले कति समय बिताउनु भयो भन्ने हो । दश मिनटभन्दा बढी तपाईंले कुनै कोभिड संक्रमित व्यक्तिका निकटमा बिताउनुभयो भने तपाईंलाई कोभिड सर्ने लगभग निश्चित हुन्छ । तर, दश मिनटभन्दा कम समय सम्पर्क हुँदा कोभिड सर्दैन भन्ने पनि होइन । त्यसैले भौतिक दूरीलाई कोभिडबाट जोगिने अर्को मूल आधार मानिएको छ ।
अहिलेसम्म कोभिड एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कुन कुन माध्यमले सर्छ भन्ने कुरामा विश्वका स्वास्थ्य विशेषज्ञहरु एकमत छैनन् । तर, मूलरूपमा सासबाटै सर्छ भन्ने कुरामा चाहिं सबैको मतैक्यता देखिन्छ । यही भएर मुखौटो लगाएर मुख छोप्ने चलन विकसित भएको हो । तर, मानिसहरु कानमा मुखौटोको उजिण्डो सिउरिन्छन् मात्र, मुख-नाक राम्रो गरी ढाकेर हिँड्दैनन् ।
‘मुखौटोको उपयोग’ हाम्रो लागि समस्याको विषय बनेको छ । आपसमा बोलीचाली गर्ने क्रममा कि मुखौटो खोलिन्छ कि त चिउँडोसम्म झारिन्छ । यो आदतले नजिकै भएको मानिसलाई पनि सकस हुन्छ । यो हरकतले नै किटाणु एकजनाबाट अर्कोमा सर्छ । त्यसकारण मुखौटोलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा नै आजको सबैभन्दा ठूलो सरोकारको विषय हो । मुखौटो प्रयोगको शैली र प्रवृत्तिमा सचेतना हुनुपऱ्यो ।
बजारको किनमेल गर्दा विचार गरौं
यो चाडपर्व र उत्सवको समय हो । यतिबेला बुढा-पाकादेखि केटाकेटीसम्म बजारमा जान्छन् । सामान किन्ने क्रममा सामान छान्नेदेखि सामानको मोलतौल गर्दै गर्दा १५ देखि २० मिनेटसम्म वा त्योभन्दा अधिक पनि निकट व्यक्तिसित हाम्रो सम्पर्क हुन्छ ।
दोकाने र ग्राहकमध्ये कोही सङ्क्रमित हुन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा दोकानवालाले भीडलाई कसरी व्यवस्थापन गरेको छ भन्ने जस्ता कुराले फरक पार्दछ । दोकानमा जानुभन्दा अगाडि हात धुने र स्यानिटाइजरको व्यवस्था गरेको छ कि छैन भन्ने कुराले पनि फरक पार्छ । यदि कसैलाई थोरै पनि लक्षण छ भने त्यसरी दोकानहरुमा नजानु नै कल्याणकारी काम हुनसक्छ किनभने आफूलाई संक्रमणको आशंका भएको कुरा अरुलाई थाहा पनि हुँदैन । अरुबाट मात्र जोगिने होइन, आफ्नो कारणले अरुलाई घातक हुने कामबाट स्वयं पनि जोगिनु राम्रो हो ।
कोभिड-१९ किटाणु कुनै पनि प्रकारको धातुजस्तो वस्तुमा ४० देखि ४८ घण्टासम्म टिक्छ । कपडामा पनि झण्डै दुई दिनसम्म रहने अध्ययनले जनाएको छ । हामीले किनेर ल्याएका सामानलाई ५/६ घण्टासम्म घाममा सुकाउने वा लण्ड्रीको वार्मरमा राखिएमा किटाणुहरु मर्छन् भन्ने वैज्ञानिकहरुको अनुमानित मान्यता रहेको छ । यसकारण सामान किनेर ल्याएपछि घरमा कसरी भित्र्याउने र कसरी राख्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि कपडा धुन मिल्ने भए धोइ-सुकाइ गरेर मात्र भित्र लानु राम्रो हो । धुन नमिल्ने भए पनि केही घण्टा सुकाएर प्रयोग गर्नु उचित कदम हुन्छ ।
टीका ग्रहण गर्ने क्रम
टीका लगाउँदा सबैले शतर्कता अपनाउनु श्रेयश्कर हुनेछ । टीका लगाउने र टीका थाप्नेमध्ये कोही संक्रमित छन् कि भन्ने कुरामा पूरै ध्यान दिनुपर्छ । कसैलाई खोकी लागेको वा रुघा लागेको छ भने सकेसम्म टीका नै नलगाएको राम्रो हुन्छ ।
यस्तै शुरुमा सबैले राम्रोसँग साबुनपानीले हात धुने र मुखौटो लगाएर टीकाको आदान-प्रदान गर्न सकिन्छ । घरमा धेरै मानिस छन् भने वा एउटाले धेरै मानिसलाई लगाउनुछ भने एउटालाई लगाइसकेपछि हात धोएर वा स्यानिटाइजर लगाएर अर्कोलाई लगाउन सकिन्छ ।
आफैंप्रति अधिक-विश्वासको घमण्ड गर्नु मूर्खता हो । जो जिद्धि वा ढिप्पि गरेर संक्रमणको सम्भावनाप्रति उदासीन हुन्छन्, तिनीहरु बढी संक्रमित भएका छन् । अस्पतालहरुमा बिरामीको उपचार गर्ने लाखौं स्वास्थ्यकर्मीहरु थिए । तर, जो जो सतर्क रहे उनीहरु नै सुरक्षित रहे । सतर्क नहुनेहरु अरुलाई उपचार गर्दा गर्दै आफैं संक्रमित भएर बिते पनि । त्यसर्थ, आफ्नो अगाडि भएका व्यक्तिमा कोभिडको संक्रमण ‘छ कि’ भनेर सतर्क हुनु नै संक्रमणबाट बँच्ने मूल उपायमध्येको एक हो ।
‘आफ्नो मान्छे र अर्काको मान्छे’
‘फलाना त आफ्नै पर्छन्, तिनलाई कोरोना छैन । भेला हुँदा केही पनि हुँदैन !’ गाउँतिर यस्ता कुरा थुप्रै सुनिन्छन् । तर, रोग वा हैंजाले आफ्नो र अर्काको भनेर नाता-सम्बन्ध छुट्याउँदैन । कोही व्यक्तिहरु घर बाहिर गई जागिर गर्ने, कामकाजमा हिँडिरहने भएर पनि कोभिडबाट जोगिएकै छन् तर, कोही ५/६ महिनादेखि घरभित्रै रहँदा पनि कोभिड संक्रमित भइरहेका घटनाहरु प्रशस्तै देखिएका छन् ।
सामान्य रुघाखोकी र कोरोनामा फरक
कोरोनाको खोकी जहिले पनि सुख्खा प्रकारको हुने स्वास्थ्यविज्ञहरुको भनाइ छ । विज्ञ र अनुभवी पीडितहरुको भनाइ अनुसार यस्तो अवस्थाको खोकीमा नाकमा तरल वा सिँगान बग्दैन । स्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ । छातीमा एकदमै गह्रुँगो अनुभव गर्छ । आफ्नो फोक्सोमा बाक्लो तरल पदार्थ अथवा लेदो प्रकारको केही जमेको छ र त्यसैकारण हावा छिरेन कि भन्ने अनुभूति हुन्छ । तर, उनीहरुको नाकबाट सिँगान बग्दैन, स्वाँ-स्वाँ बढी हुन्छ । कोरोनाको खोकी एकदमै लामो समयसम्म रहन्छ । खोक्न खोज्दा पनि खोक्न सकिँदैन । बढ्दै बढ्दै गएर पछि बोल्न पनि गाह्रो हुन्छ । तर मौसमी रुघामा खोकी थोरै लाग्छ बढी लाग्छ । नाकबाट सिँगान बग्छ । त्यो भनेको हामीमा भइरहने सामान्य एलर्जी र भाइरल इन्फेक्सनले गर्दा हो ।
अहिले दशैं र तिहारजस्ता चाड-बाडको समय छ । सबै मानिसहरु आफन्तबीच एकापसको भेटघाटमा व्यस्त छन् ।
यो महामारीको समय हो । भावनामा बग्न हुँदैन । आफू बाँचिरहे मात्र आफन्तको सरोकार पनि रहन्छ । त्यसो हुनाले यही वर्ष दशैं-तिहार आएर जान्छ अनि सकिन्छ भन्ने जस्तो गरी व्यवहार नगरौं । मिल्नेसम्म आफैंसित, आफ्नै चित्तसित सम्झौता गरौं । किनभने दशैं-तिहार त अर्को वर्ष पनि आउँछ । तर, लापरबाही गरेमा त्यो दशैं देख्न तपाईं हामी रहने छैनौं ।
Previous articleWe Should Rethink How To Celebrate Our Festivals During Pandemic
Next article2: Breast Cancer Awareness: Health talk with Bikash and Kumari Regmi
Narayan Sharma October 26, 2020	At	7:16 pm
This isatimely message. It is very important to ensure that each one of us is notacarrier of the disease. The fact that one has no symptoms is notaguarantee ofaCOVID-19 negative status. Hence, each one of us must be thoroughly aware about how the disease is transmitted and prevented from being transmitted. Bhaktajee has reflected in his article, the attitude of our community members towards the pandemic. I have personally heard people saying “aafnai manche ta honi” to justify recklessness towards COVID-19. Everyone is “aafnai” to someone or another! I think, one would be extremely selfish if the best level of caution is not applied in our approach towards this pandemic. For, this is not just about oneself but also about everybody else in the community and society at large! Thank you Bhakta jee and BNS for this useful piece atacritical time of our individual and community lives! If one does not have time to read everything in the article, read this at least: यो महामारीको समय हो । भावनामा बग्न हुँदैन । आफू बाँचिरहे मात्र आफन्तको सरोकार पनि रहन्छ । त्यसो हुनाले यही वर्ष दशैं-तिहार आएर जान्छ अनि सकिन्छ भन्ने जस्तो गरी व्यवहार नगरौं । मिल्नेसम्म आफैंसित, आफ्नै चित्तसित सम्झौता गरौं । किनभने दशैं-तिहार त अर्को वर्ष पनि आउँछ । तर, लापरबाही गरेमा त्यो दशैं देख्न तपाईं हामी रहने छैनौं ।
KevinbeR August 16, 2021	At	8:00 am